Ma U Furan Tahay Nidaamka Maareynta Mawduucyada Cusub? | Martech Zone
Dhowr sano ka hor, 100% macaamiisheenna ayaa adeegsaday WordPress sida ay nidaamka maamulka content. Kaliya labo sano kadib tiradaasna hoos ayey u dhacday qiyaastii seddex meelood meel. Tan iyo markii aan horumarinaayay oo aan qaabeyn jiray bogag WordPress muddo haatan laga joogo toban sano, badanaa waxaan fiiriyaa CMS-gaas sababo dhowr ah awgood.
Maxaan U Isticmaalnaa WordPress
cajiib Theme kala duwan iyo taageero. Goobaha sida Dulucda waa kuwa aan ugu jecelahay meesha aan ka heli karo sheybaarada ugu yaabka badan qiime jaban oo aan ku fulin karno kuna dhisi karno macaamiisheenna. Xitaa ma bixinayno mowduucyo gaar ah mar dambe maadaama aan ku dul dhisi karno a dulucda ilmaha oo u qaadan dhammaan astaamaha waalidka astaamaha cajiibka ah. Goobaha aan caadiga ahayn waxaa lagu dhisi karaa waqti yar.
Plugin iyo is-dhexgal kala duwan iyo taageero. Sababtoo ah goobo badan ayaa maamula WordPress, waa shardi shirkad kasta oo rabta inay dhexgasho nidaamka maareynta maareynta. Laga soo bilaabo iibiyeyaasha emaylka, CRM, xallinta bogga xallinta, iwm… way adag tahay in la helo shirkad aan isku dhafan.
isticmaalka waa meel walba, sidaas darteed helitaanka shaqaale iyo maamuleyaal adeegsada WordPress waa meel caadi ah. Kordhinta CMS cusub waxay ubaahan kartaa waqti tababar oo dheeri ah oo shirkad gudaheeda ah, marka adeegsiga mid caan ah wuxuu ka dhigi karaa waxyaabo xanuun badan gudaha.
WordPress Maareynta Maareynta Maareynta sida Flywheel, WPEngine, Pantheon, LiquidWeb, Iyo xataa GoDaddy, iyo inbadan oo ka mid ah ayaa noqotay wax iska caadi ah. Shirkadaha duugga ah ee martigeliya waligood dhab ahaantii ma taageerin WordPress inkasta oo ay caan ku tahay sidaa darteed shirkaduhu inta badan waxay ku jireen dagaal u dhexeeya martida iyo horumariyaha wixii khalad ku noqon kara goobta. Adeegyadan waxay bixiyaan nabadgelyo, keydyo la dhisay, shabakadaha gudbinta waxyaabaha, shahaadooyinka SSL, kormeerka, dejinta, iyo qalab kale oo fara badan si ay uga dhigaan bartaada mid deg deg ah oo xasilloon.
Hadday taasi u muuqatay aniga oo iibinaya WordPress, ila joog. Arrimo ayaa soo baxay kuwaas oo bilaabaya inay naga dhigaan inaan kula talinno macaamiisha Nidaamyada Maareynta Mawduucyada kale.
Maxaan U Isticmaalin WordPress
Sales - WordPress wuxuu ahaan jiray mid kufilan adeeg kasta oo laxiriira iibka, dulucda, ama wixii laxiriira. Waxay badanaaba ka horjoogsan doonaan qof kasta inuu daabaco qalab ku dhex jira nidaamkooda oo ku siinaya qiimo dul saar. Laakiin hadda, haddii aad dhex gasho Jetpack, waxaad la kulantay fariimo nag ah si aad u iibsato adeegyada keydka Automattic. Marka, si lama filaan ah u-doodayaasha isha furan ayaa hadda iibinaya adeegyadooda. Kuma faraxsani inay waxaas samaynayaan, ee waa uun inay hore u foolxumayn jireen.
Ammaanka Caan ahaantooda darteed, WordPress sidoo kale wuxuu bartilmaameed u noqday haakarisyada. Celcelis degel leh mawduuc si fiican loo soo saaray iyo daraasado darsin ah ayaa laga yaabaa inay ka baxaan god u furan haakarisyada sidaa darteed milkiilayaasha goobta, maamulayaasha, iyo martigaliyayaashu waa inay feejignaan dheeri ah u yeeshaan weerarada oo ay ku sii sugnaadaan dulucda mawduucyada iyo wixii cusbooneysiinta ah.
Horumarinta - Waxaan haystaa macmiil leh goob iyo noocyo isku mid ah oo hadda jira oo qiyaastii ah 8 tixraac Google Faraha madaxooda maxaa yeelay mawduucooda iyo tiro naqshadeeyayaal naqshad leh dhammaantood waxay u bixiyaan adeeg ahaan. In kasta oo ay jirto hanaan lagu hubinayo in adeegga aan la wicin in ka badan hal jeer, horumariyayaashu way iska dhego tireen oo waxay uun ku dareen tixraacyadooda. Tani waxay dhaawaceysaa goobta xawaaraha iyo darajada… mana aha wax celceliska isticmaalahu ogaan lahaa dhib la'aan. Dhaqanka xun ee WordPress API isdhexgalka ayaa si aad ah ugu soo badanaya. Waxaan hayaa daraasiin tigidhada furan oo leh horumariyeyaal si aan u saxo arrimahaas. Intooda badani way jawaabaan, qaar badanna kama jawaabaan.
Cakirnaanta - Bogga caadiga ah ee guriga ee WordPress waxaa laga yaabaa inuu leeyahay astaamo laga soo rogay widget-yada, menusyada, dejimaha goobta, dejimaha mawduucyada, iyo dejimaha fiilooyinka. Mararka qaarkood si aan wax uga beddelo hal shay bog, waxaan ku qaataa 30 daqiiqo isku day si aan u helo dejinta! Waa wax dhib ah in WordPress uusan dhisin waxqabadka ugu fiican si loo hubiyo in horumariyayaashu ay dhigaan dejintooda halka ay fududahay in la helo oo la cusbooneysiiyo.
Marka, waa maxay nidaamyada kale ee maaraynta maaddooyinka aan hirgelinay? Intii aan sii wadayno inaan eegno ku tiirsanaanta WordPress-keeda karti u lahaanshaha mashiinka raadinta oo la hagaajiyay, waxaan aragnaa natiijooyin aan caadi aheyn oo leh nidaamyada maareynta waxyaabaha kale:
Dhibcaha - waxaan gacan ka geysanay macaamiil yar oo shirkado ah oo adeegsada teknoolojiyadda Microsoft dhammaan shirkadooda oo ay hirgeliyeen Sitecore. Waa CMS fantastik ah oo leh taageero ballaadhan oo ku saabsan meheradda. Kama waaban doonno inaan kugula talinno.
Iskuduwaha - qofka aan farsamada ahayn ee sameeya naftaada, ma hubo in uu jiro CMS ka fiican meesha oo ka baxsan Squarespace. Waxaan hayaa hal macmiil oo awood u yeeshay inay dhisaan boggooda toddobaadyo gudahood iyada oo aan wax khibrad ah lahayn haba yaraatee natiijaduna ay qurux badnayd. Waxaan gacan ka geysanay hagaajinta iyo habeynta goobta, laakiin hirgelinta WordPress waligeed lama hirgelin lahayn isla waqtigaas. Boggii hore wuxuu ahaa WordPress maamulkuna aad ayuu ugu adkaaday macmiilka inuu maro oo cusbooneysiiyo. Horey way u jahwareereen, oo way faraxsan yihiin hadda! Iyo 'Squarespace' waxay sidoo kale bixisaa qaababka ecommerce.
Farshaxanka CMS - waxaan caawinaynaa macmiil, mataleysay, anigoo ku hagaajinaya boggooda Farshaxanka CMS oo waxaan horeyba u jeclahay fudeydkiisa iyo sahlanaantiisa isticmaalka. Waxa kale oo jira shabakad balaaran oo sifiican loo taageeray oo loogu talagalay Farshaxanka CMS sidoo kale - taas oo noo fududeyneysa inaan ku darno kobcinta barta baaritaanka iyo isbadalka beddelka.
Weebly - madal kale oo DIY ah oo sii wadata inay sii socoto oo ay naga yaabiso astaamaheeda hodanka ah, oo ay ku jiraan ecommerce. Wali kumaanaan maamulin macmiil halkan, laakiin iskuxirka Weebly ee isku xidhka (barnaamijyada) waa mid aad u ballaadhan una muuqda inuu haysto wax kasta oo qofku u baahan yahay.
Waxaa jira kuwa kale oo halkaas jooga sida Wix ama qaar ka mid ah nidaamyada CMS ee lahaanshaha. Wix waxay qabatay arrimo laxiriira Google oo tilmaamaya goobahooda laakiin waxay si adag uga shaqeeyeen inay boggooda ka dhigaan mashiin raadin saaxiibtinimo leh goobahoodana waa la tixraacay iyo kuwa kale oo halkaas jooga. Kaliya wax khibrad ah uma lahan Wix sanadihii la soo dhaafay sidaa darteed halkan kuma xukumi doono.
Maxay Yihiin Waxyaabaha CMS Aad U Baahan Tahay Sanadka Dambe?
Marka laga reebo mashiinka raadinta iyo awoodaha warbaahinta bulshada, runti waxaan fiirineynaa macaamiisheenna si aan u aragno waxa ay ugu baahan yihiin nidaamka maareynta maadooyinka. Sameynta baaritaan deg deg ah oo ku saabsan nidaamyadooda kale - gaar ahaan CRM - waxay naga dhigi kartaa inaan ku riixno hal jiho ama mid kale sababtoo ah sahlanaanta hirgelinta iyo taageerada isku dhafka dhinac saddexaad. Bogagga shabakaddu aad ayey uga badan yihiin buug-yaraha dijitaalka ah maalmahan - sidaas darteed fahamka sida CMS-ga ay ugu habboon tahay adiga suuq geynta iyo safarka iibka ayaa muhiim u ah xulashadaada madal.
Ma ku dhegan tahay CMS-gaaga?
Waxaan sidoo kale eegeynaa ku-tiirsanaanta. Haddii CMS aysan lahayn awooda wax dhoofinta ama soo dejinta qaab farsamo, waxay sababi kartaa walaac. Qiyaas shirkaddaada oo ka shaqeyneysa CMS dhowr sano, dhisida hay'ad leh matoorada raadinta, iyo wadista tan badan oo beddelaad ah si aad u ogaato inaad fulineyso CRM cusub oo aan lagu taageerin isdhexgal kasta. Kooxdaada ayaa go'aansaday inay rabto inay haajiraan laakiin CMS ma bixiso wax qalab ah oo sidaas lagu sameeyo.
Waxaan aragnay tan dhowr jeer - halkaasoo shirkad ay ku xiran tahay kuna xiran tahay iibiyahooda. Waa wax laga xumaado oo aan loo baahnayn. Bixiye CMS weyn oo kalsooni ku qaba naftiisa ayaa had iyo jeer siin doona habab looga guuro ama looga baxo halkii uu isku dayi lahaa inuu ku xiro macaamiisheeda.
Bixinta: Waxaan u adeegsanay xiriiriyeyaal xiriir la leh boostadan.
Tags: sentimitirku tiirsanaanta cmshorumarka cmsmuuqaalada cmsisdhexgalka cmsiibinta cmsamniga cmsnidaamka maamulka contentfarsamada cmsdaraaseynboodadaweeyalwix
Jul 4, 2017 markay ahayd 5:46 AM
Maqaal xiiso leh. In kasta oo aan dareemo in WordPress uu caqli badan yahay, haddana waxaa ka maqan awood uu ku horumariyo codsiyada xirfadeed. Baahiyahaas oo kale, waxaad u baahan doontaa Sitefinity, Sitecore, Umbraco ama CMS-yada kale ee la midka ah.